Talooyin Top Butros Samatabbixinta iyo tabaha
Butros Samatabbixinta Saga App
Butros Samatabbixinta Saga Cheats
Butros Rescue Saga
Butros Samatabbixinta Saga Help, Tips and Cheats
Haddii aad heli lahayd naftaada ku xayiran on heer Saga Butros Samatabbixinta ka heli qaar ka mid ah tacsiyaynta dhab ahaantii aad keli u badan tahay in aadan ku! news wanaagsan waxaa jira qaar ka mid ah xeeladaha la heli karo in ay isku dayaan iyo yiddidiilo aad dhex marayay jeer adag qaar ka mid ah. Furaha ciyaarta in aan la aaminsan yahay waa cidhibta, dhaqdhaqaaq kasta oo aad samayn waxay yeelan doonaan cawaaqib iyo inaad adigu marka hore ogaado waxa aad u baahan tahay in ay sameeyaan iyo sida ugu wanaagsan ee this si loo gaaro.
blocks qaarkood waa baqashada, kuwaas oo la sii daayay karaan by baabbi'iyeen blocks ku xiga …laakiinse ma aha xagga buufinta!
Waxaad marka hore u baahan tahay si ay u qiimeeyaan guddoonka, aad leedahay tiro kooban oo u dhaqaaqdo? ama waa arrin ah by macnaheedu waa wax suurtagal ah? waxaa jira Biibiida, baqashada, sanduuqyada xayawaanka, ilo, qufulada baahan furayaasha ama bambooyin u baahan in la jebiyey free? Waxaa jira xad ah xubno ka yar kala duwan ee kulankaan oo gartaan sida inay balaariso mid kasta oo wax ku ool ah waa muhiim!
buufinta midab leh – fudud quruxsan dhuftay buufin cas oo dhan tiradii lebenkii oo cas baaba'aan, haddii ay qafis. Buufinta uma baahna in la isku aadiyo kasta oo tiradii lebenkii oo kale oo uu noqon karaa mid ku anfacaya in ay nadiifiso guddiga la kulan yar ee suuragalka ah, kaliya maanka ku hayo haddii aad u afuufaan la bam waxay maayo shaqada. Use balloons wisely to create bigger matches.
baqashada – Heerarka qaarkood waxay leeyihiin lebenkii baqashada, aad leedahay si aad ku dhuftay, kuwaas oo la kulan ku xiga si lacag la'aan ah leben ah si ay u la Halaagaa. Waxaa inta badan muhiim ah in ay diiradda saaraan la xorayn, kuwaas oo blocks qafis haddii kale waxaad ka heli kartaa naftaada ka soo guuro.
Qaraxyo – kuwan yar, Fanaaniin madow sameeyo wixii bambooyin ha best..they tago kaca! wax yar xaami ah, wax halkan riwaayado laakiin tiradii lebenkii oo ku wareegsan waa la baabbi'in doonaa, kaamil for nadiifinta jidka u pooch lumay yar, Waxaan jeclahay in aan badbaadiyo bambooyin aan in la isticmaalo ee aad u hooseysa. Fiiro gaar ah aad keeni kartaa in bam soo socota si ay xayawaanka arrin si nabad ah, waxay dhab ahaantii u muuqdaan in ay maanka ku siinin! Heerarka qaarkood waxay leeyihiin bambooyin ku encased in galaas in loo baahan yahay in marka hore waxaa lagu dhufan.
bambooyinka sii daayay waa la badbaadin karaa ilaa xayawaanka waa kaliya kor ku xusan.
dhagaxyada qufulan! – aad u ogaato sida aad u heli rabitaanka in aad xirtid kor u dhagax? no? qof si fiican at King sameeya, si kastaba furayaasha ku qarsoon yihiin sabuuradda, guud ahaan kiis galaas in loo baahan yahay in lagu dhufan furan by labada go'in in dhulka ama gal dhagax adag, biibiile, qayb ka mid ah dhulka ama feature kale random (ma u gal sanduuqa kale galaas in kastoo) mar muhiim ah la sii daayay aad leedahay siinin in ay si degdeg ah u isticmaalaan, waa in laga lalmiyaa doontaa qiyaastii ilaa aad u baahato inaad isticmaasho. Blocks ama xayawaanka siinin ee la soo dhaafay hoos u xiran dhagaxyada, taas oo ah sababta ay u baahan yihiin in la sii daayay in meesha ugu horeysa!
Double ended spring – this piece of yar geniusness mar baaba'o shaqeysiin line dhan horizontal labada dhinacba, waxay si gaar ah faa'iido leh marka la sanduuqyada biraha wajahay!
Sanduuqyada Birta – haa ay ka jiraan…Waan ogahay siinin sababta? kaliya xawaaraha ah ku daray dheeraad ah garaac waxaan u maleynayaa. Waxay aan la isku aadiyo kartaa wax walba waa lagu baabbi'in ..unless qarax ay ama il! Waxay la gaar diiqayaa kartaa haddii aad u maamulaan si ay dalka xayawaankaaga iyaga on sida ay u hesho in ay hooseysa, iyada oo aan wax ay iyaga ka soo garaacayaa ay kaliya fadhiisan halkaas.
weligiisba dareemay yar xerad ee?
Talooyin Top Butros Samatabbixinta iyo tabaha, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Xayawaanka sheekada taxanaha ah samatabbixinta – waxa badan oo dheeraad ah ku lug badan waxa ay u muuqataa!
Waxyaabaha go 'Boom!’ ~ Butros Samatabbixinta Rashku
General Rescue Butros Maldahan iyo caarada
Gorgortanku Butros Rescue Saga iyo Facebook
heerka 27 – Butros Rescue Saga
heerka 59 – Butros Rescue Saga
Butros Rescue Saga – heerka 29
Butros Samatabbixinta – heerka 43
Butros Samatabbixinta Saga Help
Butros Samatabbixinta Saga Level 26 I caawi
Butros Samatabbixinta Saga Windows Phone
Download Butros Samatabbixinta Saga in PC
Butros Samatabbixinta Saga Facebook Game